ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ြပည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး ဒိန်းမတ်ပါလီမန်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ - Ministry of Education
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ြပည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး ဒိန်းမတ်ပါလီမန်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Date : 31 October, 2019
October 31, 2019 - 9:02 pm | News
နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၃၁
ဒိန်းမတ်ပါလီမန်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr Henrik Thorup Gamst ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့ နေ့လယ် (၁း၄၅)နာရီတွင် ရုံးအမှတ်(၂၁)၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးဧည့်ခန်းမ၌ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးအား လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဥ် အောင်မြင်ရေးအတွက် အဖက်ဖက်မှ ကူညီပေးနေပါသော ဒိန်းမတ်ပြည်သူများ၊ ပါလီမန်နှင့်အစိုးရတို့အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနအနေဖြင့် မည်သည့်ခွဲခြားမှုမှမရှိဘဲ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ချန်လပ်ထားြခင်း မရှိရေး၊ ကျောင်းထွက်နှုန်း လျော့နည်းရေး စသည့်အခြေခံ မူဝါဒများနှင့်အညီ သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်း ရရှိရေးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံနှင့်အတူ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ ကူညီဆောင်ရွက်နေ‌သော ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးမှုရန်ပုံငွေ လုပ်ငန်းများ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံက ထောက်ပံ့ကူညီပေးနေသည့် Capacity Development Fund(CDF) ရန်ပုံငွေအစီအစဥ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသော စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မိဘ၊ ဆရာအသင်း လမ်းညွှန်စာအုပ် ထုတ်ဝေခြင်းများသည် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရေးတွင် လွန်စွာအထောက်အကူ ပြုပါသဖြင့် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ တက္ကသိုလ်များ၊ နည်းပညာနှင့်သက်မွေးကျောင်းများနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး (School- Industry Partnership-SIP)၊ အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း ၂၀၂၁-၂၀၃၀ ပြုစုရေးတို့တွင်လည်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လိုပါကြောင်း ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် ဒိန်းမတ်ပါလီမန်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr Henrik Thorup Gamst က နှစ်နိုင်ငံ ပညာရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဥ်များအား ဆွေးနွေးကြပြီး ဧည့်သည်တော်နှင့်အဖွဲ့က သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းဆွေးနွေး ကြပါသည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးသိမ်းကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းမော်ထွန်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
Total Hits : 1141863038